Paikady 5 hampihemorana bebe kokoa ny varotra an-tsekoly amin'ny taona 2019 | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 5, 2019 Alatsinainy, Aogositra 5, 2019 Douglas Karr
Back-to-School no vanim-potoana fiantsenana faharoa lehibe indrindra amin'ny taona ary ny tontolon'ny dizitaly dia nanjary ampahany lehibe amin'ny làlana mankany amin'ny fividianana ny mpanjifa.
Miverina amin'ny fandaniam-bola any an-tsekoly
Tamin'ity taona ity, ny NRF manombatombana amin'ny oniversite mandany irery dia hampamoaka an nahagaga $ 54.5 miliara.
Miaraka amin'ny fandaniana k-12, ny fiantsenana miverina any an-tsekoly dia mitentina eo amin'ny $ 80.7 miliara, nidina tamin'ny $ 82.8 miliara tamin'ny taon-dasa.
Tamin'ny taona 2018, 23 isanjaton'ny fandaniam-bola any an-tsekoly no niseho tamin'ny Internet. Ity taona ity, 29 isan-jaton'ny fiantsenana any an-tsekoly dia an-tserasera.
Tamin'ny taona 2018, ny mpiantsena k-12 any an-tsekoly dia nandany $ 685 isaky ny isan-tokantrano tamin'ny entana mifandraika amin'ny sekoly… antenao fa miakatra hatramin'ny $ 696.70 fandaniam-bola isan-tokantrano.
Ny fandaniam-bola any amin'ny oniversite dia nanampy $ 280 isaky ny isan-trano ho an'ny totaliny $ 976.78 amin'ny fandaniana mifandraika amin'ny oniversite isan-tokantrano.
Araka an'i Deloitte, 57 isan-jaton'ny fandaniam-bola any an-tsekoly k-12 no tao amin'ny magazay vs an-tserasera tamin'ny herintaona. Amin'ity taona ity dia mitovy ny isa, 56 isan-jato.
Raha miantsena bebe kokoa i Neny, Dada dia mandany $ 115 bebe kokoa amin'ny fiantsenana an-tsekoly.
Ity infographic avy amin'ny The Shelf, Ireo antontan-taratasy rehetra ilainao hampiakarana ny fampielezan-kevitra any an-tsekoly, dia manambara paikady 5 azon'ny mpivarotra araraotina amin'ny fiantsenana any an-tsekoly:
Ny ray aman-dreny be fotoana dia miankina amin'ny sosialy sy ny finday amin'ny fividianana fanapahan-kevitra, ka alao antoka izany personalize sy fandaharam-potoana tolotra mahafinaritra sasany.
Eritrereto ny fihazakazahana a Fanombohana vaovao fanentanana hanovozana ny fihetseham-po tsapan'ny ray aman-dreny momba ny zanany manomboka amin'ny sekoly na oniversite vaovao.
Anontanio mpiaro ny marika sy ny influencers hampiditra ny vokatrao ao anaty paositra izay efa niasan'izy ireo.
Mpiara-miasa amin'i Neny bilaogera hanampy anao eo alohan'ny mpividy ary hanome anao atiny ateraky ny mpampiasa.
Ny ray aman-dreny miaraka amin'ny zaza maro indrindra mitady fomba hitehirizana, ka ampifanaraho amin'ny fonosana mora vidy ny vokatrao.
Ity ny sary feno miaraka amin'ny angona vaovao mahavariana ho an'ireo mpivarotra sy orinasa e-varotra 2019:
Tags: 2019niverina tany amin'ny oniversiteMiverina any am-pianaranamiverina miantsena any an-tsekolymarketing any an-tsekolyvarotra miverina any an-tsekolyfandaniam-bola any an-tsekolymanondro ao anatiny